Miyayna Muuqaalka 'Metrobus, Bus', Ferry iyo Metro Work ee Magaalada Istaanbuul ku dhex yaalaan Xadka Mamnuucista? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMiyayna Muuqaalka 'Metrobus, Bus', Ferry iyo Metro Work ee Magaalada Istaanbuul ku dhex yaalaan Xadka Mamnuucista?
30 / 04 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Ma basaska metrobus, doonta iyo tareenada dhulka hoostiisa ma ku shaqeeyaan gudaha xaddidan xayiraadda ka jirta Istanbul
Iyada oo qayb ka ah tallaabooyinka la qaaday CoD-19 faafa, bandoowga waxaa lagu dabaqi doonaa 1 magaalo magaalo iyo Zonguldak Maajo 2-3-30. In kasta oo dadka reer Istanbul ay guryahooda ku nagaadaan saddex maalmood, unugyo badan iyo laxiriira IMM waxay sii wadi doonaan adeegyadooda iyagoon carqalad kuheyn nabadgelyada magaalada.
Iyada oo la eegaayo cabirka cudurada faafa ee “vidvid-19 ”, Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM) waxay sii wadi doontaa inay la kulanto baahiyaha muwaadiniinta ee ku sugan baaxadda bandowga la dhaqan gelin doono Maajo 1-2-3. İBB, oo u adeegi doonta 11 207 shaqaale, oo ay weheliso baahiyaha aasaasiga ah sida gaadiidka, biyaha, gaaska dabiiciga ah, rooti, ​​khudradda iyo daryeelka miraha, adeegyada dadka da'da ah iyo kuwa naafada ah, adeegyada aaska, tuurista caafimaadka iyo qashinka adag, kooxda nadaafadda mobilada, ALO 153, oo leh howlaha dhismaha. waxay sii wadi doontaa adeegyadeeda amniga iyadoon wax carqalad ah lagu sameyn.
Gargaarka cuntada ayaa sii socon doona
Qaybinta xirmooyinka gargaarka cuntada ayaa u sii socon doonta qoysaska helaya kaalmada bulshada ee IMM oo ay dhibaatooyin ku qabaan la noolaanshaha cudurkooda. 270 shaqaale oo ka tirsan Agaasinka Adeegyada Bulshada ee IMM ayaa gaarsiin doona xirmooyinka gargaarka meelkasta oo Istanbul ah iyadoo ay weheliyaan kooxo saddex qof ah. Adeegga caano ee loo qaybiyay 100 kun oo caruur ah maalin kasta looma carqaladeyn doono si carruurta reer Istanbul aysan caano la’aan u sii ahaan. Kooxda Hal Süt oo ka kooban 60 qof, oo midkiiba ka kooban yahay laba qof, ayaa booqan doonta xaafadda oo gaarsiin doonta caano carruurtu sugeyso.
İSTAÇ WUXUU UGU CAAWIN KARAA 4 KHAMIIS 666 CAF
Dhaqitaanka farsamada, xaaqinta mashiinka iyo gacmo nadiifinta gacanta waxay ka shaqeeyaan aagagga guud sida wadooyinka waaweyn, labajibaarayaasha, Marmaray iyo iridaha metro, marinnada - marinnada, meelaha basaska / joogsiyada, gobolada iyo isbitaallada oo dhan Istanbul, İSTAÇ Nidaamka shaqada wareejinta waxaa sameyn doona 817 shaqaale. Dhamaan shaqooyinkaan, 501 gaadiid ayaa loo adeegsan doonaa. Dhammaan adeegyada ay bixiso İSTAÇ magaalada oo dhan, 4 shaqaale oo wareegto ah ayaa laga shaqeyn doonaa. Saddex maalmood oo shaqo ah, guud ahaan 666 milyan 1 kun 631 mitir murabac ah (720 garoomo kubadeed) ayaa la dhaqi doonaa, iyo 228 milyan 11 kun 474 mitir oo laba jibaaran ayaa lagu nadiifin doonaa iyadoo lagu nadiifinayo qalabka farsamada.
İSTAÇ waxay howlaheeda oo dhan ka fulin doontaa magaalada oo dhan iyada oo lagu dhisaayo qaabeynta qorshe gaar ah. Sida qorshuhu yahay;
1da Maajo, hawlgal faahfaahsan oo dhaqitaan ah oo ah 7 saldhig oo kuwa metrobus ah ayaa lagu fulin doonaa 37 shaqaale, oo ay ku jiraan joogsigii ugu dambeeyay ee u dhexeeya Söğütlüçeşme - Beylikdüzü, 44 istaag dhinaca Aasiya iyo 7 joogsi dhanka Yurub ah.
Maajo 2, shirkadaha Gasilhane iyo nawaaxigeeda ee hoos taga qaybta xabaalaha İBB waa la dhaqi doonaa. Qaab dhismeedkan; 9 saldhigyada gaaska, 6 baabuur oo dhinaca Yurub ah, 15 dhinaca Aasiya ah, iyo 13 gaadiid ah ayaa lagu nadiifin doonaa 26 shaqaale ah.
3 TONSKA Qashinka ayaa LACAGSAN doonaa 150 maalmood
Inta lagu jiro bandowga 3-maalmood, İSTAÇ wuxuu aruurin doonaa ku dhawaad ​​150 tan oo qashin ah, oo ay kujiraan guryaha karantiilka, ee Aasiya iyo Yurub, iyada oo 211 shaqaale ah ay ka shaqeeyaan kala wareejinta ayna ku ridaan 48 shaqaale. 52 gawaarida ayaa u adeegi doona macaamiladan.
ALO 153 XAALADDA
Xarun wicitaan oo Alo 153 ah, oo gacan ka siiya Istanbul wax kasta oo la ixtiraamo, waxay magaalada uga fogaan doontaa sidii taleefanka wicitaan ahaan inta lagu jiro bandowga. Alo 521, oo u adeegi doona 153 shaqaale, ayaa ordi doona gargaarka magaalada muddo 24 saacadood ah. 0 dhakhaatiir cilmi nafsi iyo 212 dhakhtar cilmu-nafsi oo khadka khadka talobixinta cilmi nafsiga (449 49 00 108 2) ka taageeri doona dadka deggan Istanbul inay dheelitiraan heerarka welwelka dadka deggan Istanbul ee ku nool go'doomin bulshada ka dib wicitaanka "Joog guriga Guriga", si loo yareeyo walwalkooda ka dhashay wasakheynta macluumaadka iyo in maskaxdooda ay ku sii adkaato.
Darülaceze, oo ka hoos shaqaysa waaxda caafimaadka ee IMM, ayaa sii wadi doonta u adeegida martidooda da'da ah shaqaalaheeda 280 ah. Waaxdu waxay kaloo ka difaacdaa martidooda khatarta fayraska Covid-19 iyadoo la adeegsanayo nidaamka cusub ee shaqada. 380 shaqaale ah ayaan aadin guryahooda oo waxay ku nool yihiin hay'adda, iyagoo shaqeeya 15-maalmood oo shaqo. 20 shaqaale ah ayaa sii wadaya martida ay ku martiqaadeen dhismayaasha ku dhex yaal Isbitaalka Ataşehir Kayışdağı ee loogu talagalay haweenka iyo muwaadiniinta hoy la'aanta ah.
KU SOO DHAWAADA SHAQADA XANAANADA
Kooxaha nadaafadda guur-guura ee waaxda Caafimaadka IMM waxay sii wadi doonaan howlahooda nadaafadeed ee xarumaha dowladda iyo isbitaallada. Marka laga reebo Maajo 1, waxaa jiri doona 2 shaqaale, 3 Kooxood oo ah Maajo 72-36.
1 KA SOO DHAWAADA DHAQANKA DHAQANKA
Waaxda Dhaqanka ee İBB waxay daabici doontaa labo filim 1da Maajo, Maalinta Shaqaalaha iyo Shaqaalaha. 11.00, filimkii gaagaabanaa ee uu jilay Metin Akdemir, "Waan imanayaa, waan baxayaa," iyo "Aabaha Aabbihiis" ee uu hoggaamiyo Kıvanç Sezer ayaa dhagaystayaasha kula kulmi doona 21.30. Labada filimba İBB Dhaqanka iyo Fanka Adigatube kana daawan kartaa kanaalka.
Kerem Görsev wuxuu la kulmi doonaa jaceylka heesaha ee Axada saacadu markay tahay 17:00 ee taxanaha "Guriga-lagu dhawaaqay Solo Concerts" ee KÜLTÜR AŞ. Taxanaha shaqo ee Guriga ee Spor İstanbul wuxuu socon doonaa 1da Maajo, si kuwa waqtiga ku qaata guryahooda ay u ilaashadaan caafimaadkooda una ilaashadaan dhaqdhaqaaq jir ahaaneed.
MAAMULKA iyo shaqooyinka dib-u-habeynta laguma soo dari doono
İSTON, Hacı Osman Grove, muuqaalka muuqaalka, Kadıköy Kurbağalıdere Yogurtçu Park waxay sii wadi doontaa shaqadeeda ku aadan qaab dhismeedka badda iyo muuqaalka dhul u dhexeeya Moda, Atatürk Olympic Stadium muuqaalka, iyo dayactirka jardiinooyinka carruurta iyo dayactirka oo ay fulinayaan Agaasinka Beeraha iyo Xadiiqadaha 1-2-3 May.
Shaqooyinka kale ee İSTON oo leh 438 shaqaale waa sida soo socota:
Muddadii u dhaxaysey 2-3 Meey; Dayactirka iyo hagaajinta Jidadka Beylikdüzü iyo Avcestlar
15 Luulyo Gawaarida Saldhigga Baska,
Muuqaalka Saldhigga Gaadiidka ee Magaalada Göztepe,
Saldhigga Cusub ee Degaanka, Dhismaha Saldhigga Karadeniz Mahallesi,
Gaadiidka Gawaarida Xarunta Dhexe ee Güngören Kale,
Hasan Tahsin Street qabanqaabada aagga
Dhismaha derbiga dhagaxa ee Sarıyer Özdereiçi,
Beylikdüzü Cemevi habeynta wadada
İSTON sidoo kale waxay ka sii wadi doontaa wax soo saarka warshadaha Hadımköy iyo Tuzla Maajo 1-2.
Adeegyada kale ee ay bixin doonaan kuwa iskaashiga la leh İBB bisha Maajo 1-2-3 waa sida soo socota:
IETT: Duulimaadyadu way sii socon doonaan iyadoon la carqaladeyn. IETT waxay cusbooneysiisay jadwalkeeda khubarada daryeelka caafimaadka, ilaalada amniga iyo shaqaalaha kale ee ahaa inay shaqada aadaan. Jimcaha, Meey 1, 493 ama xitaa in kabadan 11 kun duulimaad ayaa la sameyn doonaa. Waxaa jiri doona 493 ama xitaa 7 kun duulimaad maalmaha Sabtida iyo Axadda.
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan waqtiyada baska ee safka baska iett.gov.tr ​​internet Waxaa marin looga heli karaa arjiga Mobiett.
Metro İstanbul AŞ: Si looga hor tago shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo muwaadiniinta ku waajibay inay shaqeystaan ​​waajibaadkooda waajibka ah in la dhibaateeyo, waxaa jiri doona 30 daqiiqo faragelinno u dhexeeya maalmaha la cayimay iyo waqtiyada khadadka hoosta ku taxan.
Jimcaha, Meey 1, inta u dhaxaysa 07:00 iyo 20:00, Sabtida, May 2 iyo Axadda, 3-da May, waxaa jiri doona duullimaadyo u dhexeeya 07:00 iyo 10:00 iyo 17:00 fiidnimo.
Khadka metro M1B Yenikapı-Kirazlı
Khadka M5 rosküdar-Çekmeköy metro
T1 Kabataş- Khadka tareenka ee Bağcılar
T4 Topkapı-Masjid-i Selam tram
Intii lagu jiray bandowga, M6 Levent-Boğaziçi / / Hisarüstü metro line iyo T3 sida horay loo sharxay Kadıköy-Fashion taraamka, F1 Taksim-Kabataş Ma jiri doono wax hawlgal ah kanaalada, TF1 Maçka-Taşkışla iyo TF2 Eyüp-Piyer Loti Khadadka gawaarida. Iyadoo la raacayo go'aanadii hore, qorsheynta waxaa la sameeyay si uusan uga badnaan 25% deganaanshaha inta lagu jiro hawlgalka.
IGDAS: 7/24 Kooxaha Kajawaabidda Xaaladda Degdegga ah, 187 xarunta tooska ah ee Gurmadka degdegga ah ee Gaaska Dabiiciga ah iyo kooxaha saadka, ayaa sii wadi doona inay la shaqeeyaan 156 shaqaale ah.
SKİ: Waxay u adeegi doontaa 5 qof si adeegyada loo hakiyo. Intaa waxaa sii dheer, daraasadaha kaabayaasha aasaasiga ah ayaa sii socon doona iyada oo la ogaanayo fursadda lagu haysto halbowleyaasha waaweyn. Kaabayaasha ayaa lagu fulin doonaa 78 howlood, kuwaas oo loo qorsheeyay in lagu fuliyo 42 qodob oo kala duwan, 25 ka mid ah ay leeyihiin rukhsad sharciyeed, inta u dhexeysa 1 iyo 3 Meey.
Rootida dadweynaha ee Istanbul: Waxay sii wadi doontaa inay si buuxda uga shaqeyso iyada oo leh 3 warshadood, 535 baaldiyo iyo 383 shaqaale ah.
SYÖN AŞ: Alaabada Cunnada Badda ee Gürpınar iyo Kadıköy Waxay la adeegsan doontaa 52 shaqaale Suuqa Talaadada.
Khadadka Magaalada AŞ: Maalin walba, 6 xarriiq, 11 markab, 1 uumiinyo iyo 127 safar ayaa la sameyn doonaa. Wadarta 360 markab iyo 87 shaqaalaha deerada ah ayaa shaqeyn doona seddex maalmood. Wax carqalad ah kuma imaan doonto gaadiidka badda iyadoo ay tiradooda gaareyso 447 shaqaale ah.
SBAK AŞ: Saxeexida metroga, nidaamyada calaamadaha, barnaamijyada, dalabka, rakibaadda iyo qalliinka ayaa kusii socon doona 209 shaqaale magaalada oo dhan.
Beltur AŞ: 40 isbitaal ayaa u adeegi doona ku dhawaad ​​55 oo shaqaale 400 dhibcood.
ISPARK: Meelaha gawaarida la dhigto ee İSPARK xarunta waa lagu xiri doonaa adeegga. Si kastaba ha noqotee, si looga fogaado wixii dhibaatooyin ah ee maalmaha mamnuucista, 245 shaqaale ayaa mas'uul ka noqon doona Agaasinka Guud, qaar ka mid ah baarkinnada gawaarida furan iyo kuwa badan, Alibeyköy Pocket Bus Station, İstinye iyo Tarabya Marina, Bayrampaşa Khudaarta-Suuqa Qudaarta iyo Suuqa Khudaarta Khudaarta.
SFALT: Saddex geed oo wax soo saar leh ayaa sii wadi doona howlahooda. Jid-dusha sare ee loo yaqaan 'Asphalt Paving / team application, KadıköyWaxay ka samayn doonaan dalabka asphalt gudaha Kartal, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Beşiktaş, iyo marinka baska iyo dekada Ambarlı. Waxsoosaarkaan, wadar dhan 6 tan oo haad ah ayaa la qorsheeyay. Soosaarista iyo codsiyada ayaa dhici doona 600-2 Meey waxaana 3 ka shaqeyn doona howshan.
Waaxda Dayactirka Wadooyinka iyo Kaabayaasha Kaabayaasha: Kadıköy - Koox ka kooban 2 baadi goob ayaa ka shaqeyn doona 'Aayir Arşı Avenue'. 100 shaqaale ah ayaa kaqeybqaadan doona qorshaha ganacsiga ee la dejin doono Sabtida, 800 kun iyo Axadda, haddii roob aan roobku jirin, 30 tan oo asphalt ah.
STGÜVEN AŞ: Inta lagu jiro bandowga 3da maalmood ah, 5 shaqaale ayaa kasii shaqeyn doona 625 goobood.
SPER AŞ: Bixinta adeegyo dhinacyo badan laga bilaabo cosbitaalada, daryeelka naafada, nadaafadda musqusha, adeegyada duugista, quudinta xoolaha aan la ilaalinin ilaa daraasadaha xiriirka dadweynaha, İSPER waxay leedahay 1 shaqaale ah bisha Maajo 2, 798 kun 2 maalinta 2aad, 835 kun 3 shaqaalaha ah 2da Meey. Waxa uu socon doonaa.
Waaxda xabaalaha IMM: Waxay la shaqeyn doonaan ku dhawaad ​​300 oo shaqaale ah iyo 350 gawaarida adeega si ay howlahaasi u yaraadaan.
Dabdamiska Istanbul: Shaqaalaheeda AKOM iyo shaqaalaha gurmadka deg degga ah ee Hızır, ayaa tirada 2 ay sii wadan doonaan howlaha.
Booliska IMM: Kooxuhu waxay u digayaan muwaadiniinta ku xadgudba xeerarka inta lagu jiro mamnuucida waxayna kormeerayaan goobaha shaqada ee ay tahay in la xidho. Wuxuu la joogi doonaa saraakiisha dadweynaha ee u baahan kaalmada gaadiidka, gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka. Kooxaha booliiska, oo buuxin doona baahiyaha hoyga ee maxaabiista la sii daayay laakiin aan haysan meel ay ku sii nagaadaan, waxay ka shaqeyn doonaan 972 wareeg oo celcelis ahaan ah 3 shaqaale maalintii. Kooxuhu waxay joogi doonaan adeegga 7 saac 24 Istanbul.
Boğaziçi Yönetim AŞ: Iyada oo ay jiraan koox 703 qof ah oo ka kooban shaqaale farsamo iyo nadiifin, IMM waxay joogi doontaa garoonka qeybaha adeegga, kuwa ku xiran iyo aagag ay isticmaalaan Istanbulites. Intaa waxaa u dheer, shaqaalaha amniga iyo shaqaalaha farsamada waxay diyaar u noqon doonaan xaaladaha degdegga ah goobaha laga bixiyo latalinta maareynta.
Hamidiye AŞ: In kasta oo wax soo saarka iyo shixnadaha ay sii socdaan 1-2 Maajo, wax shaqo ah ma jiri doonaan 3 Maajo. 167 Ganacsadayaasha Xamdiye Biyaha waxay 263 maalmood u adeegi doonaan 760 baabuur iyo 3 shaqaale ah.
Magaalada Ankara, mareenada waxay raacaan rakaab ka baxsan awoodda
Metro Ayaa Ka Shaqeyneysa Istanbul?
1 Meelaha shidaalku ma shaqeeyaan Istanbul bishii May?
Saldhigyada Metro ee Istanbul waxay socon doonaan saacadaha 24
Codsiga tigidhka elektarooniga ah ee gaadiidka tareenka iyo baska
Metros ayaa isku xiraya Istanbul
1 Meelo iyo jidad hoose ayaa lagu xirayaa Istanbul bishii Maajo
Dejinta Coronavirus ee Gaadiidka Mass Mass ee Izmir! İZBAN, Bas, Tram iyo Ferry Times waa la Bedelay
İZBAN, Bas, Tram iyo Jumladaha Ferry Waqtiga Isbadalku wuxuu ka dhacay İzmir!
Khadka Talada Maskaxda
Taageerada Gaadiidka ee Xirfadleyda Daryeel Caafimaad ayaa laga sii wadaa Konya
Marka la eego baaxadda Mashruuca Horumarinta Nidaamka Beeraha Izmir, xariiqa a
Miyuu 1 ka joojiyay adeegyada maraakiibta maraakiibta iyo metrobus bishii May
Wadooyinka waawayni xiran yihiin oo loogu talogalay Maalinta Haweenka
Ankara Metros Ma Dhamaynayo Yaa La Qaban Doonaa?
Metros ee Ankara
170 waxaa lagu dhaawacay Meel Koonfurta Kuuriya Metro